Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta kullan deg-deg ah isugu yeeray golihiisa wasiiradda – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo maanta kullan deg-deg ah isugu yeeray golihiisa wasiiradda
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kullan deg-deg ah isugu yeeray xubnaha golihiisa wasiiradda, iyadoona kullankaan la sheegayo inay uga hadli doonaan arrimo aad xasaasi u ah.
Golaha wasiiradda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kullankooda caadiga ahaa ahayd inay yeeshaan maalintii Khamiista ee lasoo dhaafay, balse waxaa loo baajiyay arrimo la xiriira ololaha nadaafadeed ee ka socday magaalada Muqdisho.
Kullanka maanta la isugu yeeray golaha wasiiradda Soomaaliya ayaa la sheegayaa in diiradda lagu saari doonno arrimo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin dar-dargelinta hindise sharciyeedyada loo gudbinayo baarlamaanka Soomaaliya.
Qodobada kale ee kullanka maanta looga hadli doonno ayaa waxaa ka mid ah heshiiska maamulka Somaliland iyo shirkadda DP World ay 5-tii bisha September ee 2016-ka ay ku kala saxiixdeen magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Heshiiskaasi ayaa ahaa mid ku saabsan in muddo 30 sano ah ay shirkadaasi DP World maamuli doonto dekedda magaalada Berbera.
Madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa haatan laga sugayaa inay jawaab deg-deg ah ka keenaan heshiiskaasi oo ay kala saxiixdeen maamulka Somaliland iyo shirkada DP World.